NamasteNEPALI.com: घर जलेको आगोले जिउ तताउने मित्रहरु र पूर्व सहकर्मी ददी सापकोटाको भ्रम छर्ने प्रयत्न
घर जलेको आगोले जिउ तताउने मित्रहरु र पूर्व सहकर्मी ददी सापकोटाको भ्रम छर्ने प्रयत्न
- डिल्लीराम अंमाई, बेल्जियम
सहकर्मिहरुको खालो उतार्न खप्पिस उनी र उनको ब्लग संसारभरिका पत्रकारहरुको हित बिपरित , पत्रकारितामा सह-अस्तित्व तथा आत्मा सम्मानको बिपरित केबल सहकर्मिको चरित्र हत्याको लागि राम्रैसँग लागि परेको बिगत केही समयका उनका प्रतिकृयालाई हेर्ने हो भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । गत बर्ष उनको कोपभाजनमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र सिँगो नेत्रित्व पर्‍यो । जसको खन्डन अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्ट र युरोप शाखाले गरिसकेको छ । पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका पूर्वसदस्य ददी सापकोटासँगको यो अन्तर्बिरोध दोश्रो अधिवेशनको सेरोफेरोबाट शुरु भएको थियो । ददी सापकोटाको संयोजकत्वमा लक्ष्मण देवकोटा र गुणराज शर्माको तीन सदस्य छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यसले काम गर्न सकेन र छोटो समयको म्यान्डेट पाएको समितिले सम्पूर्ण सदस्यलाई दुइ बर्षजति अनिर्णयको बन्दी बनायो । केन्द्रले अधिबेशनबाट निर्बाचित १७ सदस्यीय कार्यसमितीलाई पोर्टफोलियो बिभाजन गर्ने सहितको मान्यता सात महिनापछि दिदै शाखालाई आधिकारिक पत्राचार गरेको थियो ।
अधिवेशनको प्रकृयाबारे हाम्रा पनि चासा रहेका हुन । तर अब अनुशासनको प्रकृया अनुसार केन्द्रले दिएको बिकल्प बाहेक अन्य कुनै बिकल्प रहेन । अधिवेशन अब धेरै टाढा जादैन छिट्टै हुन्छ, संगठनको बिघटन चाहनेले अधिवेशनको बारेमा चासो नराखेकै बेश । उनले लगाएका आरोपहरु पनि हेर्नुस् कती झुट र पुर्वग्रही छन । “(http://www.nepalplus.com/archives/29112)
आत्मा मार्न खोज्नु वा सेन्सर सहितका शर्तहरु लादेर एउटा तथ्यलाई कुरुप बनाउने प्रयत्नले के तपाईंको पत्रकारितालाई जिबन दिन सक्ला त ? मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको क्षेणिक वाह वाहले तपाईंका कलमरुपी आत्मभित्रको स्वाभिमानलाई सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुर्याउला कि गिराउला महोदय ? अहँ हामीलाई विश्वाश छैन , हामी सहकर्मिको सहधर्मिताबाट अलग रहेर आँफु भित्र पत्रकार खोज्न सक्दैनौ । तपाईं पत्रकारितामा हुनुहुन्छ वा इगो मिसनमा हुनुहुन्छ ? खोज्नुस् र गन्तब्य तय गर्नुस् । सयमा सय नै झुट त्यो पनि तुरुन्तै प्रमाणित गर्न सकिने बिश्लेशण लेखेर के गर्न खोज्नु भएको हो सस्थापक्ज्यु ? हाम्रो भन्नुहुन्छ भने तपाइमाथि आक्रमण हुँदापनी त्यही आवाज थियो, अहिले पनि त्यही छ हेर्नुस् http://www.nepalplus.com/archives/17991 तपाईंकै आफ्नै ब्लगमा ।
कुनै पनि पत्रकारको मत स्वबिबेक र स्व-बिस्लेशणको कुरो हो । त्यसमा पत्रकारको टाउको दुखाइ हुने कुरै थिएन र हुँदैन । तर डोनाल ट्रम्प प्रबृतीले मिडियालाई पेलेर जाने अधिक सम्भावना देखेर होला अमेरिकन पत्रकार र मिडियाले हिलारी प्रती बढी सहानुभुति राखे । जुन स्वाभाबिक पनि हो । जसले पनि आफ्नो आत्माको जिबन्तता खोज्दछ ।
Labels: ABROAD, NEWS, VIEW